22 | June | 2007 | Layma's World
Architect က ဒါတွေ ပေးတယ်..
Posted on June 22, 2007 by layma
သူ…..လူ့ လောကထဲစရောက်တော့မည်……. ။ အမေက သူ့ ကို ဆေးခန်းလေးတစ်ခုမှာ လူ့ လောက ထဲကို စတင်ဝင်ရောက် စေခဲ့တယ်…….။ သူနဲ့ အတူလာတဲ့ သူငယ်ချင်း တချို့ က ဆေးရုံမှာ….. တချို့ က သားဖွားခန်းမှာ…..တချို့ က အိမ်မှာ…….ဒီလိုနဲ့လူ့ လောကထဲကို နေရာတစ်ခုကို အမှီသဟဲပြုလို့ သူတို့ ရောက်ခဲ့တယ်………။
သူ…..အဖေ့ရဲ့ တိုက်ခန်းလေးထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တယ်……။ သူ…..လေးနှစ်သားရောက်တော့ အမေက မူကြို ပို့ တယ်…….။ နောက်တော့ မူလတန်း ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ကျောင်းတွေမှာ သူ…..ပညာတွေ သင်ခဲ့တယ်…….။ နွေရာသီကျောင်းတွေပိတ်တော့ အားကစားရုံ မှာ ကာရာတေး သင်ရတယ်……ရေကူးကန်မှာ ရေကူးရတယ်……။ အဖေ အလုပ်အားတဲ့ ရက်တွေမှာ ကစားကွင်း ၊ ပန်းခြံ နဲ့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် လိုက်ပို့ ပေးတယ်…….။ ဗဟုသုတ ရစေဖို့ငါးပြတိုက် ၊ အမျိုးသားပြတိုက် စတဲ့ ပြတိုက်တွေလည်း ပို့ပေးတယ် ……..။
သူ……တက္ကသိုလ် ရောက်တော့ ရည်းစား တစ်ယောက် ရတယ်…..။ မကြာခဏ Class လစ်ပြီး ကောင်မလေးနဲ့ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်တယ်…….ရုပ်ရှင်ရုံ မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်………။ သူ…..ဘိုင်ချောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်မလေးက နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ ထမင်းလိုက် ကျွေးခိုင်းတာ မကျွေးနိုင်လို့ သူ့ ကို ဖြတ်လိုက်တယ်……။
သူ…..convocation hall မှာဘွဲ့ ယူတော့ အဖေနဲ့အမေမျက်နှာမှာ ပီတိတွေနဲ့ ………။ သူ……ရုံးတစ်ရုံးမှာ အလုပ်ရတယ်…… ပညာစုံပြီးရင် ကြင်ရာစုံဖို့လိုတယ်ဆိုလို့့ အမေပေးစားတဲ့ မိန်းမနဲ့ ခန်းမ တစ်ခုမှာ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်……။ မင်္ဂလာဦး အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာ နဲ့မိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာမှာ အလှူငွေ လှူခဲ့တယ်…..။
သူ…….Golf ရိုက်တတ်လာတယ်……စနေ ၊တနင်္ဂနွေ သူ ဂေါက်ကွင်းသွားတဲ့အခါ မိန်းမက shopping center/mall , super market တွေမှာ shopping ထွက်တယ်……။ အိမ်စရိတ် လုံလောက်အောင် ကြိုးစားရင်း သူ……ကြံတတ်ဖန်တတ်လာတယ်……။ “အစားမတော် တလုတ်” အတွက်ကြောင့် သူ……တရားရုံးမှာ တရားစွဲခံရတယ်……….။ သူ……ထောင် ( အမှားကိုသိ၍ အမှန်ပြင်နိုင်ရန် ထိန်းကျောင်းပဲ့ပြင်ပေးသော နေရာဟု ဆိုသည် ) ကျတယ်………။ ထောင်ကျနေတုန်း မိန်းမက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တယ်…….။ မိန်းမကို လေဆိပ်လိုက်ပို့ချင်လိုက်တာ……။
ထောင်ကလွတ်တော့ မိန်းမစုဆောင်းလာတာနဲ့မိဘအမွေလေးတွေ စုပေါင်းပြီး Shop house လေးတစ်လုံး ၀ယ်လိုက်တယ်…….။ အောက်ထပ်မှာ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး အပေါ်ထပ်မှာ လူ နေတယ်…….။
ဒီလိုနဲ့သားသမီးတွေ ရလို့လူလားမြောက်ကုန်ပြီ……။ သူ…..ဆံပင်ဖြူပေမယ့် သမီး အလုပ်လုပ်တဲ့ Hotel က Fitness center မှာ အမြဲကစားလို့ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်……..။ မိန်းမကတော့ ရိပ်သာ ခဏခဏ ၀င်တယ်……။
တနေ့ တော့…….Fitness center မှာ ဆုံတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့Bar မှာ သွားသောက်တယ်…….။ မိုးသောက်ယံမှာ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြော ပျက်ပြီး သူ…….သေဆုံးခဲ့တယ်…..။ သချိုင်းမှာ သူ့ ကို ဂူသွင်းတယ် ( အရင်ကတည်းက ကိုရီးယားကား တွေကြည့်ပြီး အားကျလို့ဂူလုပ်ပေးဖို့ မှာထားပြီးသား ) ……။ သူ……ဂူထဲမှာ ကျေနပ်စွာ အနားယူ နေတယ်…….။ ၃ ရက်လောက်နေတော့ သချိုင်းရွှေ့ ရမယ့်သတင်းကြားတယ်…….။ သေတာတောင် အရိုးမဆွေးသေးဘူး နေရာရွှေ့ ရမယ်ဆိုတော့ သူ…….တော်တော် စိတ်ဆိုးသွားတယ်……။ ဘယ်သူ့ ကြောင့်လဲ ဆိုတာ သူစုံစမ်းလိုက်တယ်……။ တရားခံကို သိလိုက်ရတယ်……။
အဲဒီညက……မြို့ သစ်ပုံစံ( Town Planning ) ဆွဲတဲ့ ဗိသုကာကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို သူဝင်သွားလိုက်တယ်……..။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဗိသုကာကြီးကို အားရပါးရ လည်ပင်းညှစ် လိုက်တယ်……..။ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ချွေးပြန်နေတဲ့ ဗိသုကာကြီးကို သူ့မကျေနပ်ချက်တွေ ပြောပြီး အားရတော့ ပြတင်းပေါက်ကနေ ပေါ့ပေါ့လေး သူ ပြန်ထွက်လိုက်တယ်…….။ ပြန်အထွက်မှာ မနည်းအားယူပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ဗိသုကာကြီးရဲ့ အသံကို သဲ့သဲ့ ကြားလိုက် ရတယ်……….။
“…….မင်း…..လူ….မှား…..နေ…..တယ်……” ။ ။
(လူသားတို့မွေးဖွားချိန်မှ သေဆုံးချိန် အထိ ဗိသုကာတို့ဖန်တီးသော လက်ရာများနှင့် ကင်းကွာ၍ မရပါ….)
Filed under: Architecture |	10 Comments »